Gleam: IiApps zeNtengiso eziYilelwe ukukhulisa ishishini lakho | Martech Zone
Gleam: IiApps zeNtengiso eziYilelwe ukukhulisa ishishini lakho
NgoLwesithathu, ngoFebruwari 9, 2022 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 9, 2022 Douglas Karr
Umhlobo wam wathi ukholelwa ukuba ukuthengisa ngumsebenzi apho wenza ukuba abantu abangafuni ukuthenga into bayithenge. Owu… Andivumanga ngentlonipho. Ndiyakholelwa ukuba ukuthengisa kubugcisa kunye nesayensi yokutyhala kunye nokutsala abathengi kunye namashishini ngomjikelezo wokuthenga. Ngamanye amaxesha ukuthengisa kufuna umxholo omangalisayo, ngamanye amaxesha sisipho esingakholelekiyo… kwaye ngamanye amaxesha yeyona nto incinci ikhuthazayo.
Ukukhanya: Ukunika amandla ngaphezu kwabathengi abangama-45,000+
Ukugcwala inikeza izicelo ezine ezahlukeneyo zokuthengisa ezibonelela loo nudge. Zingamasango okurhwebesha umtyeleli ukuba abandakanyeke nzulu ngebhrendi yakho - nokuba oko ukwabelana ngako ngomlomo, ukubhalisa kuluhlu lwe-imeyile, ukwabelana ngomfanekiso wentlalo, okanye ukufumana umvuzo. Usetyenziso lwentengiso ye-Gleam zidityaniswe ngokupheleleyo kwi-ecommerce yakho, amaqonga entengiso, kunye namajelo oluntu ukwenza umsebenzi… kwaye inokuphelelwa yideshbhodi enye:
Qhuba uKhuphiswano -Yakha ukhuphiswano olunamandla kunye ne-sweepstakes kwishishini lakho okanye abathengi. Uluhlu lwethu olukhulu lweentshukumo zendibaniselwano, indibaniselwano kunye neempawu zewijethi zikunceda ukuba wakhe iindidi ezininzi zamaphulo.
Imbuyekezo ngokukhawuleza -Yenza ngokulula imivuzo efumanekayo ngokukhawuleza ukutshintshiselana ngezenzo ezivela kubasebenzisi bakho. Ifanelekile kwiikhuphoni, izitshixo zomdlalo, ukuphuculwa komxholo, umculo okanye ukukhutshelwa.
Iigalari zoLuntu -Ngenisa, lungisa kwaye ubonise umxholo kwiinethiwekhi zentlalo okanye uqhube ukhuphiswano lweefoto ezibandakanyekayo ngeGalari yethu entle.
Thumela i-imeyile -Eyona ndlela ilumkileyo yokwakha uluhlu lwakho lwe-imeyile. Bonisa umyalezo ojoliswe kuwo okanye iifom zokungena kumntu ofanelekileyo ngexesha elifanelekileyo kwaye uzilungelelanise ngokuthe ngqo nomnikezeli wakho we-imeyile.
Udibaniso lubandakanya amaqonga angaphezu kwe-100, kubandakanya iAmazon, iTwitter, klaviyo, YouTube, Bit.ly, Facebook, Kickstarter, Shopify, Instagram, Salesforce, Product Hunt, Twitch, Spotify kunye nokunye...
Bhalisela i-Gleam kwaye wakhe i-App yakho yokuqala
Ukubhengeza: Ndisebenzisa amakhonkco adibeneyo kulo lonke eli nqaku Ukugcwala kunye namanye amaqonga.
tags: ukhuphiswano appsii-apps zokubamba nge-imeyilei-imeyile yokuthatha i-popupinjongo yokuphumaukukhanyagleam.ioii -apps zentengisoapps umvuzousetyenziso lwegalari yoluntu
Indlela i-CRM ye-Ecommerce eNzuzisa ngayo i-B2B kunye ne-B2C yamashishini